नेपालले गुमाएका भु-भाग किन फिर्ता नहुने ? सन १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार ६० हजार हेक्टर जमिन भारतले फिर्ता गर्नै पर्छ भन्ने सम्पुर्ण नेपालीले सेयर गरौ – MeroOnline Khabar
अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो । व्रिटिसहरुले शासन गरिरहेको अफगानिस्तानदेखि श्रीलंका, बंगलादेश इन्डोनेसिया हुँदै बर्मासम्म यी सबैलाई इन्डिया भनिन्थ्यो । ती मध्येबाटै सन् १९७१ मा पुर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बन्यो । अरु पनि देशहरु स्वतन्त्र भए । ती भू–भागहरु छुटिने र बन्ने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन लिन पाउने अवस्था थियो । त्यतिबेला बेलायतसँगै कुरा गर्नुपथ्र्यो । सन् १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग करिब सबै नै इन्डियामा पर्यो । त्यतिबेला एक हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फहराएको कुरा इतिहासकारहरु बताउँछन् त्यसो हुनाले हामीले अहिले पनि हामीले बेलायतसँग कुरा गर्न सक्छौं ।
यी इतिहास साक्षी राखेर भन्न सकिन्छ कि भारतले कुनै कुनै दिन त्यो भुभाग आआफ्नो मुलुकलाई सुम्पनु पर्ने हुन्छ । यसबाट प्रुफ हुन्छ कि एउटा सानो कश्मिर बिगत ६९ बर्ष देखि स्वतन्त्रता लागि लडाइँ लडिरहेका छन कहिले स्वतन्त्र हुन्छन् त्यो परको कुरा भयो । हाम्रो नेपालले सन्धि अनुसार गुमाएको भुमी सन्धिबाट पाएको भए पनि आफ्नो गुमेको भुमी फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द न त कुनै राजनैतिक दलले नै गरेको नै छ नत कुनै कश्मिरी जनतको जस्तो संघर्ष नै नेपालबाट भएको छ । कश्मिरले आफ्नो स्वतन्त्र पाउदा हामीले पनि हाम्रो गुमाएका भुभाग पाउनुपर्छ ।
राजनीति आखिर कस्को लागि गर्ने ? नेपाल, नेपालीको लागि होईन र ? नेपाल र नेपालीको भनेर किन दिल्लीको इसारामा प्रमुख राजनीति दलहरू आघिपछी हुँदै चाप्लुसी भएर बस्ने ?
दशकौंदेखि जारी दार्जीलिङ भएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा ३ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन उनीहरुको मागलाई विभिन्न चरणमा साम, दाम, दण्ड, भेत अपनायर भारतले दार्जीलिङको अगुवा आन्दोलन नेतृत्वलाई मुखमा बुजो लगाएर राखेका छन । त्यो नियति त्यहाँको आम ७५ प्रतिशत नेपाली भाषी जनतालाई मात्रै थाहा छ ।
र्जिलिङलाई गोर्खाल्यान्ड दिनु भनेको पुन नेपालमा दार्जीलिङ गाभ्नु सरह मान्दछ । त्यो हकमा नेपालले आफ्नो भुमि, आफ्नो आम नागरिक हुनुको नाताले कश्मिरमा पाकिस्तान सहयोग गरेको अवस्था थियो भने त्यो मुद्दा किनारा लागिसक्यो वा नेपाललाई पनि आतंकबादी संगीन आरोप लगाएर बर्बर कश्मिरमा जस्तो हत्याहिंसा भारतको हुने थियो होला । पुर्खाले नासोको रूपमा अदम्य शाहा, वीर गाथा, अमर त्याग, बहादुर पहिचान, रगतको थोपाथोपा बाट साटेको त्यो दार्जीलिङ, सिक्किम, देहरादुन, सतलज, कुमाउ, गडवाल, यमुना नदि देखी सिङ्गो भुभाग हामीले पाउनु पर्छ । हटेर होईन डटेर वीर, बहादुर हाम्रो पुर्खाको थोपा थोपा रगत पसिनाले सिन्चित त्यो भुमीले, पू्र्खाले हामिलाई अहिलेसम्म गिज्याईरहेका छन जबसम्म फिर्ता लिदैनौ तवसम्म हामिलाई धिक्कार्ने छन । पुर्खाको सम्पत्तिको हामी हकदार हुनुको नाताले आज आम पुर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिणको नेपालीहरुको काधमा यो जिम्मेवारी रहेको छ । हाम्रो जमिन हामिलाई चाहियो नत्र जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न पनि हामी तयारी हुनुपर्छ जसरी इतिहासमा हाम्रो पुर्खाले गरेका थिए । लेखक – हेमचन्द्र राई
← भण्टा खाने गर्नु भएको छ भने यो अवस्य पढ्नु होला ! जानकारी का लागि शेयर गर्नुहोस
बार्सिलोनामा भएको दुर्घटनामा नेपाली युवकको मृत्यु रिप लेखेर सक्दो सेयर गरिदिनुहोला । →
सुुकेधारा विस्फाेट सिलिण्डर होइन, कुकर बम विस्फोट